19 / 08 / 2019 | RayHaber | raillynews
Maalinta: Ogast 19, 2019
Helitaanka Fudud ee Degmadda 310 oo leh Xariiq 3
Gawaarida gaadiidka ee ay maamusho TransportationPark, oo ah shirkad hoos timaada Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, ayaa muwaadiniinta adeegsanaya. Khadka 310, oo bixiya gaadiid u dhexeeya degmooyinka Dilovası, Gebze iyo Darıca, waa mid ka mid ah gawaaridaan caan ah. [More ...]
Khadka Ankara-Konya YHT Km: 183 + 060-187 + 130 Ka dib jilicsanaanta u dhaxeysa Maamulka Khadka Tareenka ee Waddanka Turkiga (TCDD) 2019 / 361123 iyada oo qiyaasta ugu badan ee GCC 914.045,17 TL-183 + 060 Km: 187 Dhisida waardiye u dhexeeya 130 [More ...]
Nadiifinta Hawada ee loo yaqaan 'YHT 81DBM Zone Ayadoo ay sabab u tahay jilicsanaanta, jilicsanaanta Hay'adda Waddooyinka Tareenka ee Waddanka Turkiga (TCDD) oo loogu talagalay dhismaha nadiifinta qulqulka ka samaysan degmada Yaanoo 2019DBM oo leh qiime ku dhow 300019 / 1.189.720,96 TLB waa 81 TL. [More ...]
3 Dhismaha Adeegga Cusub ee TCDD
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, TCDD'ye 3-dabaq dhismeedka dhismaha waxay sameysay heshiis borotokool. Kocaeli degmada Metropolitan, heshiis maamuuska leh ee Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) dhismaha adeega sheekada 3 bidix. Isugeynta aagga 910 [More ...]
Isbeddellada ee Turkey Bixiso Gaadiidka Revolution ee Aqoonta
Trabzon, degmada Ortahisar ee Çilekli, Kavala iyo Bulak xaafadaha ayaa booqday wasiirka Turhan, iyagoo lahadlay shacabka oo dhagaystay dhibaatooyinka iyo dalabaadka. Wasiirka Turhan, warshadaha kaabayaasha dalka Turkiga, in dhowr goobood oo muhiim ah, waxbarashada caafimaadka [More ...]
Enigma oo bilaash ah gudaha Ba inkentray
Başkentray, oo ka shaqeeya Ankara, ayaa jahwareer ka qaba dhibaatooyinka kaararka safarka bilaashka ah. Khilaafaadka kaararka safarka ee bilaashka ah ee Başkentray, oo la bilaabay Abriil, wuxuu sii wadaa inuu khalkhal keeno. [More ...]
Tababbarka Kala Duwan ee EGO illaa Shaqaalaha
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay siisay GO Wax ku ool ah Isgaarsiinta iyo Tababbarka Maareynta Cadaadiska shaqaalaha EGO General Director Agaasimayaasha Nidaamka Rail Systems iyada oo loo eegayo waxqabadka tababarka guriga gudihiisa. Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Ankara Mansur Yavaş [More ...]
6 Khadka Baska Cusub ee Denizli
Dawlada Hoose ee Magaalada Denizli, oo billowday isbadal lagu sameeyo gaadiidka dadweynaha dhaqso, dhaqaala badan iyo raaxo leh ee dadka Denizli, ayaa keenaya qorshayaal iyo dalabyo saf badan. 6 waxay xustay khadka baska ee ku dhow 60 aag gooni ah [More ...]
Ciidamada Dawlada Hoose ee Magaalooyinka'nye'nin Castle, Düzsaylan iyo xaafadaha Inkur oo isku xirta wadada laamiga Akkus-Niksar ayaa bilaabatay. Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Ordu Mehmet Hilmi Guler, “Heerar sare, casri iyo raaxo [More ...]
Sawirrada Eskisehir Waxay qurxinaysaa Wadada Wadada Frankfurt
Duqa magaalada Yılmaz Büyükerşen iyo xafiisyada dawlada hoose ee u tagay Jarmalka tartankii magaalooyinka kubada cagta ee ay soo qabanqaabisay degmada Frankfurt, ayaa ka qaybgalay xafladda bilawga metrooga oo lagu qurxiyey muuqaal qurux badan oo Eskişehir. Eskisehir [More ...]
Mashruuca Channel Istanbul wuxuu bilaabmayaa Maalinta 30 Agoosto
Taariikhda tallaabada ugu horreysa ee mashruuca Kanal Istanbul, oo aad muhiim ugu ah Bosphorus, ayaa la shaaciyay! Sannadkan 30 waxaa lagu shaacin doonaa injiilka Kanal Istanbul bisha Agoosto 2019. Xulashada taariikhda 30 Agoosto, 30 Agoosto [More ...]
Tayada iyo raaxada wadooyinka ayaa ku wanaajinaya dhagaxa dhagxaanta dhagaxa ee Kayseri
Dowladda Hoose ee Magaalada Kayseri waxay biloowday shaqo-dooneyn xilli xilli xagaaga ah oo aan weli xasilloonayn. Dhismooyinka waaweyn ee magaalada waxaa ku daboolan dhagax-dhagxaan dhagax dhigay, kaas oo wanaajinaya tayada iyo raaxada. Duqa Magaalada Caasimadda Memduh Büyükkılıç, [More ...]
Wadooyinka Yedikuyular iyo Bertiz ayaa la dayactirayaa
Dowlada Hoose ee Magaalada Kahramanmaraş waxay sii wadaysaa dayactirkeeda iyo shaqooyinkeeda dayactirka ee kusocda wadada Yedikuyular Ski Center iyo xaafadaha Bertiz. Asphalt wuxuu ku shaqeeyaa hal gacan gudaheeda inta udhaxeysa Kahramanmaraş Dhismaha wadooyinka Dowlada Hoose ee Magaalada iyo howlaha dayactirka [More ...]